China Dibromomethane fanamboarana sy orinasa | Mingxing
Milanja molekular: 173.83
Fisehoana: Rano mangarahara tsy misy loko
Teboka mitsonika - 52oC
Tebila 96-98oC (lit.)
Ny hakitroky ny etona 6.0
Tsindry etona 34.9mmhg (20oC)
Fanondroana refraktika N20 / d1.541 (lit.)
Fampiasana lehibe: amin'ny maha mpanelanelana ny pestiside, Dibromomethaneno fotodrafitrasa lehibe indrindra amin'ny famolavolana karazana fungisida manaparitaka haingam-pandeha avo be, ary koa ireo akora ho an'ny acaricides taonina lehibe. Dibromomethane dia mahazaka lelafo tsara. Ny fampidirana Dibromomethane amin'ny polymer dia afaka mampihena ny hafanana mandoro ny plastika.
Izy io dia azo ampiasaina ho toy ny akora simika synthesie, solvent, vata fampangatsiahana, retardant flame ary antiknock agents, disinfectant ary desinfectant amin'ny fanafody.
Fitsaboana vonjy taitra: famindrana haingana ireo mpiasa avy ao amin'ilay faritra voapoizina mankany amin'ny faritra azo antoka, atokàny izy ireo ary ferana fatratra ny fidirana. Tapaho ny afo. Soso-kevitra ny amin'ireo mpiasan'ny fitsaboana vonjy taitra dia tokony hitafy fitaovam-pisefoana miady saina sy akanjo miaro amin'ny afo. Hetezo araka izay azo atao ny famoahana loharano mba hisorohana azy tsy hiditra amin'ny toerana voafetra toy ny tatatra sy ny tatatra famoahana tondra-drano. Tondra-drano kely: entina na alentehina amin'ny fasika na fitaovana tsy may may hafa. Fivoahana be dia be: manamboatra dike na mihady lavaka handraisana azy. Saronana amin'ny foam mba hampihenana ny fahasimban'ny etona. Alefaso amin'ny fiara tanky na mpanangona manokana amin'ny alàlan'ny paompy, fanodinana na fitaterana mankany amin'ny toeram-pitsaboana fanariana fako.
Ny fampisehoana catalytic an'ny CE Mn oxide mitambatra ho an'ny fandoroana ny Dibromomethane: Ny oksida CE Mn sy ny singa tokana CE, ny catnistes Mn oxide dia nomanina tamin'ny fomba coprecipitation, ary ny hetsik'izy ireo ho an'ny fandoroana ny Dibromomethane amin'ny entona rambon'ny PTA oxidation dia nohadihadiana, ny rafitra kristaly amin'ireo catalista dia nampiavaka an'i H2-TPR. Ny valiny dia naneho fa ny oksidaina mitambatra CE Mn dia namorona rafitra vahaolana matanjaka noho ny Mn3 + miditra amin'ny latina CeO2, ary nahavita fihenan'ny mari-pana ambany. Ny fahombiazan'ny fandoroana katalytic an'ny catalista an'ny Dibromomethane dia tsara kokoa noho ny an'ny singa tokana CE sy Mn oxides, Raha ny haben'ny Dibromomethane dia 0.4% ~ 1.0% ary ny hafainganam-pandeha dia latsaky ny 24 000 H-1, ny fiovam-po Dibromomethane dia mihoatra ny 95%, ary ny totalin'ny vokatra Br2 sy HBr dia mety hahatratra mihoatra ny 83%
Fonosana: 230kg / amponga.
Fahaiza-manao isan-taona: 2000 taonina / taona
Teo aloha: Triallylamine